Horudhac: Chelsea vs Tottenham Hotspur… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee London derby) – Gool FM
(London) 29 Nof 2020. Kooxda Chelsea ayaa soo dhoweynaysa Tottenham Hotspur kulanka loo garanayo London Derby caawa oo Axad ah.
Kulankan oo ka dhacaya garoonka Stamford Bridge ayaa Tababaraha Chelsea ee Frank Lampard, waxa ay soo dhoweynayaan Macallinkii hore ee Blues, Jose Mourinho oo markaan horkacaya naadiga Spurs.
Waa kulan xiiso gaar ah leh waqti kasta, kulankaan ayaa ballan qaadaya kooxda ku sii nagaanaysa halka ugu sarreysa horyaalka, maadaama labada kooxoodba ay qaab ciyaareed aad cajiib ah u soo bandhigeen.
Tottenham ayaa haatan ku jirta kaalinta labaad ee kala horreynta horyaalka Premier League, waxaana ay leedahay 20 dhibcood kaddib sagaal kulan oo ay ciyaartay, halka Chelsea ay haysato 18 dhibcood sagaal kulan oo ay dheeshay.
Chelsea ayaa soo dhoweynaysa Christian Pulisic kaddib muddo bil ah oo uu garoomada kaga maqnaa dhaawac muruqa ah.
Soo laabashadiisa waxay la macno tahay in tababare Frank Lampard inuu heysto shax buuxda oo taam ah.
Tottenham ayaa weyn doonta daafaceeda Toby Alderweireld maxaa yeelay waxa uu ka sheeganayaa dhaawac gumaarka ah oo ka soo gaaray kulankii ay wajaheen todobaadkii la soo dhaafay naadiga Manchester City.
Tababaraha kooxda Spurs ee Jose Mourinho ayaa rajeynaya in Steven Bergwijn, Hugo Lloris iyo Giovani Lo Celso ay ka gudbaan dhaawacyada ka soo gaaray kulankoodii ay guusha soo gaareen Khamiistii ee Europa League.
>- Chelsea ayaa guuleystay saddex kulan oo isku xiga Premier League oo ay la ciyaareen Tottenham, waana in ka badan inta ay ka adkaatay siddeedii kulan ee ka horreeyay.
>- Spurs ayaa badisay kaliya 7 ka mid ah 56 kulan oo Premier League ah.
> – Tottenham ayaa badisay kaliya hal kulan oo ka mid ah 34 kulan oo ay ku ciyaareen Stamford Bridge tartammada oo dhan tan iyo 1990-kii, waxay ayna shabaqeeda gool ka ilaashatay 17-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay booqatay.
>- Chelsea ayaa dhalisay 22 gool oo Premier League ah xilli ciyaareedkaan ka hor bilowga todobaadkan, waxay dhaliyeen goolal badan todobo ka mid ah sagaal kulan oo ay ciyaareen, kaliya waxay ku guuldarreysteen inay sidaas sameeyaan labadii kulan ee ay ciyaareen ilaa haatan kooxaha kale ee lixda ah ee ugu sarreeya: 0-2 v Liverpool iyo 0-0 v Manchester United.
>- Waxa ay Blues guuldarro la’aan tahay (unbeaten) 13 kulan tartammada oo dhan, waxa ay guuleysteen siddeed kulan waxaana ay barbaro galeen shan kulan.
>- Chelsea ayaa guuleysan karta todobo kulan oo xiriir ah horyaalka iyo kulammada koobabka markeedii labaad iyadoo ka hoos ciyaareysa Macallin Frank Lampard, kaddib markii ay todobo kulan oo xiriir ah adkaadeen laga soo bilaabo September ilaa October 2019.
>- Goolhaye Edouard Mendy ayaa shabaqiisa gool ka ilaashaday todobo kulan oo ka mid ah 10-kiisii kulan ee uu u ciyaaray kooxda Chelsea tartammada oo dhan, waxaana laga dhaliyey kaliya saddex gool, mid ka mid ah goolashaas ayaana yimid kulankiisii ugu horreeyey oo uu u saftay Blues, kaasoo uu ka horjeeday Tottenham.
>- Guul ayaa Tottenham soo gaarto ayaa siin doonta bilowgeedii ugu fiicnaa ee xilli ciyaareed Premier League ah, iyadoo dhaafi doonta 22 dhibcood oo ay uruursatay kaddib 10 kulan oo ay sheegay markii uu hoggaaminayay Harry Redknapp xilli ciyaareedkii 2011-12.
>- Spurs ayaa ugu sarreyn doonta miiska kala sarreynta Premier League ugu yaraan toddobo maalmood xilli ciyaareedkan, waana in ka badan marka la isku daro 10-kii xilli ciyaareed ee markaan ka horreeyey.
>- Jose Mourinho ayaa isha ku haya in uu iska ilaaliyo in laga badiyo saddex kulan oo isku xigta oo horyaalka ah oo uu ka horyimaado isla hal tababare ama hal koox markiisii ugu horreysay xirfaddiisa.
>- Son Heung-min ayaa dhaliyay sagaal gool Premier League ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee 10 gool ama ka badan u dhaliya Spurs kaddib 10 kulan oo horyaalka ah wuxuu ahaa Gary Lineker oo dhaliyay 12 gool fasal ciyaareedkii 1991-92.